ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ပေ့ခ်ျမှာ ban လုပ်ခံထားရတဲ့ လူတွေ အများကြီးဘဲ။ အဲဒီက သတင်းလိမ်တွေကို အောက်ကနေ comment ရေးပြီး ဖြေရှင်းတဲ့ လူမှန်သမျှကို တန်းစီပြီး ban တာ .. နည်းနည်းလေးတော့ ရှက်ပါဦး | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ပေ့ခ်ျမှာ ban လုပ်ခံထားရတဲ့ လူတွေ အများကြီးဘဲ။ အဲဒီက သတင်းလိမ်တွေကို အောက်ကနေ comment ရေးပြီး ဖြေရှင်းတဲ့ လူမှန်သမျှကို တန်းစီပြီး ban တာ .. နည်းနည်းလေးတော့ ရှက်ပါဦး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ပေ့ခ်ျမှာ ban လုပ်ခံထားရတဲ့ လူတွေ အများကြီးဘဲ။ အဲဒီက သတင်းလိမ်တွေကို အောက်ကနေ comment ရေးပြီး ဖြေရှင်းတဲ့ လူမှန်သမျှကို တန်းစီပြီး ban တာ .. နည်းနည်းလေးတော့ ရှက်ပါဦး
မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ သတင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေးက ပြန်ကော်ပီလုပ်တော့ RB News ကို ဖြုတ်ထားလိုက်တယ်။
မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ သတင်းမှာ နာမည်တပ် စွပ်စွဲတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် ပေ့ခ်ျက နာမည်ဘာလို့ မတပ်ရဲတာလဲ?
Al Jazeera ရဲ့ ဗီဒီယိုကို လုပ်ကြံသတင်းလုပ်ပြီးတော့ အတော်လေး သွေးပျက်နေပြီလား?
သွေးမပျက်နဲ့ဦး .. သွေးပျက်ရမယ့် အချိန်မရောက်သေးဘူး။ မကြာခင် ရောက်လာမယ်။ စောင့်မျှော်ပါဦး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ပေ့ခ်ျမှာ ban လုပ်ခံထားရတဲ့ လူတွေ အများကြီးဘဲ။ အဲဒီက သတင်းလိမ်တွေကို အောက်ကနေ comment ရေးပြီး ဖြေရှင်းတဲ့ လူမှန်သမျှကို တန်းစီပြီး ban တာ .. နည်းနည်းလေးတော့ ရှက်ပါဦး။
ကျွန်တော့်ဆီ message ပို့ပြီး ပြောနေတဲ့လူ မနည်းတော့ဘူး။
အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ရဲရင် နိုင်ငံတကာ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ နိုင်ငံတကာ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကို ၀င်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။
← မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကို ချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ပါ ။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတဲ့ မြန်မာပါ
မြန်မာအစိုးရက မေတ္တာရပ်ခံထားပေမဲ့ မလေးရှား ကယ်ဆယ်ရေးသဘောင်္ မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ သွားမယ် Plans to proceed with its controversial Arakan State “food flotilla” later this month →